Haiwen Bio-နည်းပညာ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
ရှန်ကျန်း Haiwen Bio-နည်းပညာ Co. , Ltd မှaleading supplier of fine chemical in Shenzhen China, was founded in 2008. It develops fast and set up branch company in many cities. The company enjoys the advantage in exporting and transportation brought by the costal city.
အဆိုပါကုမ္ပဏီအဆင့်မြင့်စက်များနှင့်အတူစံအပင်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ထိန်းချုပ်ရန်ပြည့်စုံ QA သို့နှင့် QC စနစ်နှင့်ကိုယ်ပိုင် HPLC, GC နှင့်ခရမ်းလွန် Spectrophotometer ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်, ထိုကဲ့သို့သော Trenbolone Acetate, Boldenone Undecylenate, Drostanolone Propionate, Nandrolone Decanoate, Methenolone Enanthate, testosterone Enanthate, testosterone Cypionate အဖြစ် cortical ခံတွင်း Steroid တစ်မျိုးအရည်, Anti-အီစထိုဂျင်စတီရွိုက်, SARMs Steroid တစ်မျိုး, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ဟော်မုန်း, peptides နှင့် Steroid တစ်မျိုးအမှုန့်တို့ပါဝင်သည် ဒါကြောင့်အပေါ် Tetracaine, Linocaine, Benzocaine, MT-1 နှင့်။
ဟို Steroid တစ်မျိုးမှုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနနှင့်အသိပညာမှတဆင့်ကျနော်တို့ကကြီးထွားလာကမ္ဘာ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းထောက်ပံ့, ပိုကောင်း-performing နှင့်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေး steroids နေကြသည်။ ကျနော်တို့တရုတ်နိုင်ငံတွင်မြောက်မြားစွာဦးဆောင်ဓာတုနှင့်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုင်အခဲပူးပေါင်းဖွင့်ထားပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒါအပေါ်အားကစားရုံလယ်ကွက်, ဆေးခန်း, အဖွဲ့အစည်း, ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အပါအဝင်အများအပြားလယ်ကွင်းမှပြန့်နှံ့။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖောက်သည်များနှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရှန်ကျန်း Haiwen Bio-နည်းပညာ CO.LTD ။
နေရပ်လိပ်စာ: 18F, Guanghao အဆောက်အဦ, Meilong လမ်း, Longhua ခရိုင်, ရှန်ကျန်း, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်
ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်: မစ္စစ် Cathy
18F, Guanghao အဆောက်အဦ, Meilong လမ်း, Longhua ခရိုင်, ရှန်ကျန်း, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်